Isikhokelo soBuntu ukwenza umtsi wokugqibela | Ubunlog
Ngaba ucinga ngokwenza umtsi ku-Ubuntu kwaye awazi ukuba ungaqala ngaphi? Apha uya kufumana enye Isikhokelo sokuqalisa ku-Ubuntutu ukuze ucace gca malunga namanyathelo okuqala ekufuneka uwathathile ukuba ufuna ukufaka nakuphi na ukuhanjiswa kwayo kwikhompyuter yakho.
Siyathemba ukuba oku Inkqubo yoBuntu Cima onke amathandabuzo akho kwaye ukuba usenayo, ungathandabuzi ukuma ngakwethu icandelo lezifundo apho uya kufumana khona izikhokelo zazo zonke iintlobo zobuchwephesha (kwaye kungabi njalo) kubuchwephesha bobuntu.
Yintoni oya kuyifumana kwesi sikhokelo Ubuntu? Ngokuyintloko, uya kuba nokufikelela kumxholo oza kukunika impendulo kwimibuzo eqhelekileyo ezivelayo xa uthatha isigqibo sokushiya iWindows okanye nayiphi na enye inkqubo kwaye ufuna ukufaka Ubuntu endaweni yoko.
Ukucoca amathandabuzo ngo-Ubuntu
Ngaba ikhompyuter yam iyahambelana noBuntu?
Zithini iincasa zeBuntu? Yeyiphi oyikhethayo?
Khuphela uze ufake Ubuntu
Indlela yokukhuphela ubuntu
Uyitshisa njani i-CD e-bootable okanye i-USB ngesifakeli Ubuntu
Ungamfaka njani uBuntu
Funda ukufaka Ubuntu ngamanyathelo ambalwa
Ukuqhagamshelana kokuqala noBuntu
Ukuqala ngo-Ubuntu, ndiza kuqala ngaphi?
Yintoni iDash kwaye yenzelwe ntoni?
Abaphathi befestile vs iidesktops
Uyifaka njani inkqubo ku-Ubuntu
Uyifaka njani imixholo ebonakalayo ku-Ubuntu
Imixholo ebonakalayo ye3 yokwenza ubuNtu
Conky, iwijethi yokubonisa izixhobo zePC yakho
Uluhlu lwezinto zokugcina Ubuntu
Ungayicima njani indawo ekugcinwa kuyo iPPA
Isiphelo kunye nemiyalelo yayo esisiseko
Guqula ukujongwa kwesiphelo sendlela.
Ungazifaka njani iiphakheji ngesandla
Ungayichitha njani into kwihard drive yakho
Amanyathelo ama-5 okukhawulezisa Ubuntu bakho